Ama-Mantra Akhethekile Aphuma KuBuddha - U-Edwin Van Der Hoeven
Ama-mantra akhethekile ama-5 avela eBuddhism
Lawa ma-mantra avela eBuddhism asetshenziswa njengezinto zokuzindla ukuze sikwazi ukugxilisa ukunaka kwethu. Ngokuphinda imantra ngendlela yokukhuluma noma yokucula - noma ezingqondweni zethu - singakuthulisa ukugeleza komcabango. Lapho sithulisa ukucabanga kwethu sihlangana nezendlalelo zethu ezijulile zokwazi. Ukuphishekela ukuzindla ukuxhumana okuqondayo nomthombo wobukhona bethu.
ICEBISO - Funda futhi ibhulogi: "" noma Ukungabi nalutho
Futhi kunomphumela wokuphulukisa ngoba umsindo ukudlidliza nomzimba wethu uphendula kudlidlizela. Ngoba imisindo izwakala ezindaweni ezihlukene emzimbeni wakho, ingaphakamisa ukuvimba okunamandla ngakho-ke ibe nomphumela omuhle. Ngakho-ke, zama ukuzwa ama-mantras emzimbeni wakho futhi ungacabangi kakhulu ngokuthi uwabiza kanjani. Okuhlangenwe nakho kwami ​​siqu ukuthi ukuphakama kwezwi lami kwesinye isikhathi kuyashintsha ngenkathi kuculwa amazwi aphindaphindwayo.
Ngezansi kunezibonelo zama-mantras asendulo ngesi-Sanskrit - ulimi olungcwele lwasendulo oluvela eNdiya, yebo ungakwazi ukuvuma okwenziwe ngokwakho sebenzisa.
I-OM AH HUM
Memezela njengoba: kuya ku-ah hoem
I-mantra yabo bonke amaBuddha namakhosi avukile wesikhathi esedlule, samanje kanye nekusasa. Ungayisebenzisa ukubusisa abantu, izilwane, izindawo nezinto. AmaTibetan ajwayele ukusebenzisa le mantra ekukhulekeleni, lapho enza i-altare noma enza iminikelo. Umkhuba omuhle ukusho ngaphambi, ngesikhathi nangemva kokudla. Cabanga ngabo bonke abantu abenze isiqiniseko sokuthi lokhu kudla kusendishini yakho futhi manje balungisa ukudla ngokuzayo. Babusise ngale mantra.
U-OM AH HUM VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM
Memezela njengo: to ah hoemdala guru pemma siddhie hoem
Intandokazi yomuntu siqu futhi enye yamazwi aphindaphindwayo aseTibetan; iVajra Guru mantra evela ePadmasambhava. Le mantra ibiza wonke amaBuddha, amakhosi nabantu abavukile. Amandla ayingqayizivele ale mantra asetshenziselwa ukuthula, ukuphulukiswa, uguquko nokuvikelwa kulesi sikhathi esinobudlova nesiphithiphithi. Ngokwencazelo esiqala ngayo nge-mantra yangaphambilini ethi "Om ah hum" enezelwa ngereferensi yePadmasambhava ehlukile, enamandla futhi emsulwa njengedayimane. Sicela isibusiso ukuba sisinikeze zona lezi zimfanelo ezizosenza sikwazi ukuvuka ebuthongweni obuthinta ukwazi kwethu.
Funda kabanzi mayelana nokuzindla kweVajra Guru >>
Vumela lo mculo usize ukuzindla kwakho!
Amandla omculo, imiphakathi yasendulo ibivele yazi ukuthi izigubhu, ukucula noma ukudansa kungakufaka ocansini. Manje siyazi ukuthi leli cadence lithinta ubuchopho ngo 'ukungena kwengqondo'.
Lo mculo wokuzindla kwe-chakra resonance wokuzindla usiza ukuthi ungene esimweni esibi futhi uxhasa umkhuba wakho wokuzindla nsuku zonke.
Lonke uchungechunge lwe-Ghost of Love luqukethe izindla ezi-7 ze-chakra ezisebenza ngakunye ku-resonance ethile. Ungawuthola umculo khulula download umqhele chakra! Inamandla kakhulu lapho isetshenziswa phakathi nenyanga egcwele. Chofoza lapha ukuthola eminye imininingwane >
Memezela njengo: om mani pemma hoem
Imantra kaChenrezig - iBoddhisatva Avalokiteshvara. I-13th Dalai Lama yamanje ingukuzalwa kukaChenrezig, uBuddha Wobubele Obungapheli. Sebenzisa le mantra ukufisela ububele nomusa wothando osuka enhliziyweni yakho kubo bonke abaphilayo kule cosmos. Isibonelo, sebenzisa le mantra lapho kunabantu onenkinga nabo. Bafisele ukuthi bakhululeke ekuhluphekeni kanye nomthombo lapho ukuhlupheka kwabo kwavela khona.
UTAYATHA OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SOHA
Memezela njengoba: tajattaa to moeni moeni mahaa moeni-jeh soha
I-mantra kaShakyamuni Buddha, uBuddha esimaziyo njengoSiddharta Gautama, uBuddha wesikhathi sethu. Sebenzisa le mantra ekuqaleni kwesifundo noma ekuqaleni kokuzindla ukuze uBuddha aphindaphinde isibusiso sakhe: isithembiso sokukhulula wonke umuntu. Uma uyiphinda le mbumba, uzovuselela isibusiso sakhe enhliziyweni yakho. Zibone ngeso lengqondo iBuddha phambi kwakho noma ekhanda labanye abantu nezinto eziphilayo. Cula bese usho i-mantra bese ucabanga ukuthi ukukhanya kwegolide kukhanya kusuka ku-Buddha kuya ezinhlizweni zezidalwa noma enhliziyweni yakho. Kuyindlela enamandla kakhulu futhi enamandla yokupha nokuthola uthando.
€4.99 €0.00 Ebhekheni yezitolo
I-TAYATHA Gate Gate GARES PARASATE PARASAMGATE BODHI SoHA
Memezela njengoba: tajattaa isango esangweni paragateh para-samgateh boo-die soha
Ukuhlakanipha kwe-Heart Sutra mantra. Konke akunalutho ngokwako. Kodwa-ke, ubuBuddha lapha bulandela incazelo ehlukile yokuba yize kunalokho esizokucabanga ekuqaleni. Incazelo yamaBuddha yokungabi nalutho isho ukungakwazi ukuqamba lokho okuyiqiniso, amandla angenamkhawulo. Isibonelo esilula salokhu ukuthi: lowo thisha oqinile esikoleni ongijezisa ngaso sonke isikhathi ungubaba onothando wezingane ezi-2 ekhaya kanye noprofesa onolwazi ababheka kuye kozakwabo. Akukho ncazelo nganoma yini engabala njengeqiniso likathisha - ngakho-ke kukhona ubuze. Le mantra ngakho-ke ingasetshenziselwa 'ukuyiyeka', noma ukufunda ukubona ukuthi konke okuvezwa yi-ego kuyinkohliso. Konke akupheli, konke kuyize.
Funda futhi: ”” Noma Ukungabi Nalutho
Izinto ezinhlanu zokuzindla ezikusiza ukuthi ugxile
I-6 Januwari, 2020
Manje konke kuhlukile
I-19 Januwari, 2020